ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းပုံရိပ်….
August 10, 201901211
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် လူသိများလာတဲ့ ဆယ်လီမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ယောကျာ်လးလေး ပရိသတ်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Thwe Thwe Aye and nwenwe tun fb
နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖေစ်ဘုတ်ကနေတစ်ဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ခြယ်သထားတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ရင့်ကျက်တဲ့ အလှတွေ ပေါ်လွင်နေလွန်းပါတယ်။
ညို့အားပြင်းတဲ့အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို DD Jewelry အတွက် ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Source: DD Jewelry and nwenwe tun fb
ပရိသတတြှရေဲ့ အားပေးခစွခြငမြှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ မောဒြယမြလေးတစယြောကဖြှစတြဲ့ နှယနြှယထြှနြးကတော့ ဖစဘြေုတပြေါကြနတစေဆြငြ့ လူသိမွားလာတဲ့ ဆယလြီမလေးတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ ခစွစြရာကောငြးတဲ့သူတစယြောကဖြှစတြဲ့အပှငြ ညို့အားပှငြးတဲ့ အလှကိုလညြး ပိုငဆြိုငထြားတာကှောငြ့ ယောကွာလြးလေး ပရိသတတြှအမွေားကှီးပိုငဆြိုငထြားတာလညြးဖှစပြါတယြ။
နှယနြှယထြှနြးကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညြး သူမရဲ့ ဓါတပြုံတှကေို ဖစဘြေုတကြနတစေဆြငြ့ မွှဝပေေးလိုကပြှနပြါတယြ။ အလှတရားတှေ ပေါလြှငနြတေဲ့ ပှငဆြငမြှုတှနေဲ့ ခှယသြထားတဲ့ နှယနြှယထြှနြးကတော့ ရငြ့ကကွတြဲ့ အလှတှေ ပေါလြှငနြလှနြေးပါတယြ။
ညို့အားပှငြးတဲ့အလှနဲ့ ပရိသတတြှကေို ဖမြးစားလိုကတြဲ့ နှယနြှယထြှနြးရဲ့ ဓါတပြုံတှကေို ပရိသတတြှအတှေကြ ဖေါပြှပေးလိုကပြါတယြ။ နှယနြှယထြှနြးကတော့ ဒီဓါတပြုံတှကေို DD Jewelry အတှကြ ရိုကကြူးပေးခဲ့တာဖှစပြါတယြ။
ဟိန်းမင်းသူက သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ အတူ ပြန်ဆုံရလို့ အရမ်းပျော်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်ကို ချပြလိုက်ကြောင်း……